Kushambadzira Kukuru: Tarisa Beyond Kushambadzira | Martech Zone
Yakakura Kushambadzira: Tarisa Beyond Kushambadzira
China, January 3, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chikamu chakakura chekushambadzira kugona kuve nerwizi rusingaperi rwezvinyorwa zvekutsigira vanhu vako, chigadzirwa kana sevhisi. Munyika yebhizinesi, zvinhu zvinoshanduka mazuva ese - tinowana bhizinesi idzva, tinogadzira zvigadzirwa zvitsva, tinopa masevhisi matsva uye tinowana vatengi vatsva. Chiitiko chega chega chinopa furu yakakura yezvinhu zvitsva!
Muchokwadi, iyo chete nzira yekubuda kunze kwezvakakura zvemukati pane yemubatanidzwa webhu saiti ndeyekupererwa nevanhu, zvigadzirwa, masevhisi kana vatengi. Izvo anogona kuitika uye pamwe chiratidzo chakanaka chekuti blog kana imwe yekushambadzira svikiro haisi iko chaiko kwaunofanirwa kutarisa!
Chris akandirumbidza nhasi kuti ini ndinokwanisa kugadzira zvemukati semvura. Hazvisi nyore nguva dzose asi aya ndo maitirwo andinoita…
Maitiro Ekubaya muRuzhinji rweMukati
Chikonzero ini ndisingapere zvemukati ndechekuti yangu blog inovhara a yakafara swath yemisoro. Ini ndinogona kutaura pamusoro fomu kusimbiswa rimwe zuva, a bhuku rakanetsa ini inotevera, sei verenga chinhambwe nePHP neMySQL uye WordPress tweak rimwe zuva.
Zvese izvi zviri mukati mechikamu cheKushambadzira Technology. Fomu Validation ndiyo yekumberi-kumagumo, kana inonyanya kuoneka, chikamu che software application kana webhusaiti. Kana iwe usingakwanise kugadzira mafomu ari nyore kushandisa uye usinga tarise kune ruzivo rwevashandisi, zvinokanganisa kutendeseka kwako munzvimbo… uye semhedzisiro, zvinokanganisa Kushambadzira kwako - kuti ukunde pfungwa kana kupfuura ipapo.
Iri bhuku rine mazwi? Zvakanaka, ibhuku kuti makambani mangani anokura zvisingaite pasina data rinotsigira rinoti rinofanira. Iyo Black Swan. Izvo zvakakosha kune Vanotengesa, handiti? Zvinofanira kuva!
Kuverenga kureba? Vatengi vako vari kubva kupi? Kana iwe uri mutengesi, iwe unonyatso ziva kwauri vatengi vako vari kuuya kubva saka zviri nani iwe kuti udzidze maitiro ekuziva kuti kune vashanyi vewebhu vako varipi.
Uye WordPress kugadzirisa? Huye, iyo posvo inobata nekuchengetedza vatengi pawebhusaiti yako nekupa zvakabatana zvemukati uye nekupa yekutsvaga injini yekugadzirisa nzira dzekutsvaga nyowani.
Kushambadzira hakusi kwekushambadzira Blogs, Mabhuku uye Misangano
Kana iwe ukazvibvunza wega kuti ndiani wako Dhipatimendi rekushambadzira mazuva ano, iwe unofanirwa kutarisa kupfuura iyo ol 'yemasangano chati. Wese munhu ari mukambani yako kubva kune Wako Mutengesi kuenda kune Wako Wemutengi Wevamiririri anogona kukanganisa kushambadzira kwako kupfuura avo vakomana vanovaka tsamba dzinoshamisira. Inguva yekuti, saMarketer, iwe wakatanga kuterera!
Usanditenda? Ita a Google Kutsvaga "Huntington Bank Sucks". Iko kusanganiswa kwehurombo webhusaiti, rutsigiro runotyisa uye mudonzvo iyo yakaomeswa nechando mukusaita kwaita iyo yepamusoro maSeinjini Ekutsvaga! Izvo sei zvekushambadzira kukuru?
Iyo Blog haina Kutarisisa Pakushambadzira
Pane runyorwa rwe epamusoro Ekushambadzira Blogs ane akakura anotevera kunze pamambure. Ini ndinoda rondedzero uye ndinoritarisa mwedzi wega wega. Mwedzi wega wega, blog yangu haisi pairi. Mwedzi wega wega ndinobvunza kuti sei. Ndakawana mhinduro yangu mazuva mashoma apfuura… kududzirwa: bhurogu rangu harina kutarisisa pakushambadzira.
Ndichiri kukoshesa kuti kune mimwe miganho yakaoma kune chii ari Kushambadzira Blog kwakatsanangurwa se, Ndiri kufara kuti handina kunyora runyorwa! Kana iwe uri Marketer uye izvo chete zvinhu zvauri kutarisisa kune chero basa rinopinda nekubuda mubazi rako, kushambadzira mablog, mabhuku uye misangano… Rombo rakanaka! Unozoida.
Kana ndiri ini? Ini handisi kuzopererwa neChinyorwa chero nguva munguva pfupi!
Tags: brand brandmhedzisiro yebhizinesicmokutaurirana kwevatengigoogle shandukoklout zvibodzwapagelevermutungamiri wezvemagariromamiriro enharaundasocial loginsocial sharingmotokariWordPress
Unogona Kuva NeWebhu 2.0 Dambudziko Kana…
Heano maitiro aunoti kutenda pasina kana izwi!
Ndira 6, 2008 na5: 24 PM
Nezve "… kubaya mune zvakawanda zvemukati", ini ndakawana nzira yevaridzi vewebhusaiti kuti vawane zvimwe zvemukati nekushandisa Google yekumberi kwekutsvaga mabasa ... inokutendera iwe kunongedza tsvagiridzo dzako ku "yemahara kushandisa, kushambadzira, kana kunyange kugadzirisa" zvemukati ... ingori tip.